Lalao Throne Kingdom at War aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Throne Kingdom at War an-tserasera
Lalao Online Funny Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny olon-dehibe Strategy lalao ady lalao Online Games Voynushka Building Economic simulation Browser tetika Castle Battle iPlayer Fiarovana ny fiarovana
Mendrika ny mpanjaka ny hanome ny fanahiny ho an’Andriamanitra, indrindra fa raha niseho tampoka izany, rehefa nanomboka ny fifandonana sy ny ady eo amin'ny seza fiandrianana. Ny famirapiratry ny satro-boninahitra volamena dia manintona ireo izay mendrika sy tsy mendrika tanteraka. Tao amin'ny fanjakana Amaric dia maty ny mpitondra, tsy namela fa tsy mpandova fotsiny fa tsy nieritreritra ny momba ilay mpandray ihany koa izy. Nanjaka nandritra ny taona maro izy ary nitazomina nandinika tany maromaro indray mandeha, ary taorian'ny nahafatesany dia nihena daholo ny zava-drehetra. Tongasoa eto amin'ny fanjakan'ny Medieval Throne fanjakana amin'ny lalao Ady. Ny tompon'ny taranaka dia manan-jo hitaky ny seza fiandrianana. Saingy ny lalana iray mankany amin'ny fanatontosana tanjona, narafitra tamin'ny vatan'ny fahavalo, ary koa ny asa famoronana ho tombontsoan'ny taranja rehetra. Taorian'ny fanonganana sy fifanolanana, rava ny fanjakana, fotoana izao tokony hieritreretanao ny hamelona indray ny fahalehibeazana taloha ary ny fananganana fanjakana matanjaka sy matanjaka. Manomboka amin'ny fananganana tranobe sy fananganana trano, atsangano ny haavo ny olom-pirenena ho any amin'ny avo indrindra, fananganana Akademia ary hanao fikarohana ao anatiny mba hahazoana fidirana vaovao. Hanitatra sy hameno ny tafika miaraka amin'ny miaramila vaovao: lefona, antsy, zana-tsipìka, scout, mpitaingin-tsoavaly. Ampianaro izy ireo ary ampio hatrany ny haavo mpiady, aza mitsitsy vola sy hery. Voalohany indrindra, eritrereto ny fiarovana ny tanàna, satria ny fahavalo dia hiezaka ny hanafika fa tsy hahomby. Avelao ho lasa tsy azo ovana ny trano mimanda. Na izany aza, tsy misy na inona na inona mandrakizay ary tsy maninona fa manamafy orina sy mivelatra ianao, dia misy foana matanjaka kokoa. Noho izany, fotoana izao hieritreretana momba ny firaisana amin'ny Vondrona na hananganana ny Oranao manokana. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-monina aminao dia afaka miady amin'ny fahavalo hafa ianao, na inona na inona izy matanjaka. Nefa aza matoky tanteraka ny rehetra. Ilaina ny mieritreritra stratejika, mandinika ny vokatry ny dianao, ary aza manao hetsika maimaika. Ny person personan'ny mpampiasa amin'ny lalao dia ny Hero. Izy no lehiben'ny komandin'ny Tompo sy mpiara-miasa akaiky aminy. Aza avela hivoatra ny lehibanao, hanatsara tsy tapaka, hahazoana fahaiza-manao, fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny fitarihan'ny tafika amin'ny fampielezankevitra, ny mahery fo dia manamafy azy ary mampitombo ny vintana hahazoana fandresena. Ho tsikelikely ianao, ary ho lasa matanjaka ary saika tsy ho tanteraka. Nefa tadidio fa eo amin'ireo namana akaiky indrindra dia mety misy mpitsikilo fahavalo na mpivadi-pinoana izay nivarotra vola iray. Miambena hatrany, aza avela ho gaga ny tafika. Hamarino ny fanantenan'ny Tompo ary ampio izy handresy ny sezafiandrianany tiany. Lalao
• Grika lehibe. Hita daholo ny antsipiriany rehetra, fenoina ny loko, ary manampy ireo fahasamihafana ny loko hanavahana ireo tarika hafa sy ny tany. • Famolavolana feo manimba misy fiantraikany manokana mifandraika. • Ny kilalao dia aseho amin'ny fiteny malaza rehetra, izay misy ny Rosiana. • Miaraka amin'ny fahafahana maimaimpoana hamolavola ny lalao, omena votoaty omena. Manampy amin'ny alàlan'ny dingana vitsivitsy haingana kokoa izy io ary mandroso tsara kokoa amin'ny tanjona ankamaminy. Ho an'ireo maniry ny handresy ny olan'ny tenany manokana dia misy ny fampitaovana ny fanakanana ny fividianana rotra. • Ny mpandray anjara dia afaka mamorona baiko manokana na hanatevin-daharana ny efa misy. • Tsy maintsy mamita asa ianao, mandray anjara amin'ny fikarohana ary miady amin'ny mpilalao hafa. Hanao inona
Na dia namboarina ho an'ny fitaovana finday aza ny lalao, dia azonao atao koa ny misintona ny seza fiandrianana amin'ny ady amin'ny solosaina. Samy manana ny lafy ratsiny ireo safidy roa ireo. Milalao amin'ny solosaina, ho hitanao ny zava-mitranga eo amin'ny sehatry ny ady eo amin'ny voninahiny sy ny antsipirihany. Fa milalao amin'ny takelaka na telefaona dia hiaraka aminao foana ilay kilalao, ahafahanao mandray anjara amin'ny dia manaraka amin'ny fotoana rehetra. Mandritra ny hetsika dia misokatra amin'ny làlana rehetra ny fotoana vaovao:
• fanamoriana mahery fo
• Fampandrosoana ny faritany
• Fitrandrahana sy famokarana entana
• fahaiza-manao miaramila
• Fanitarana ny tanin'izy ireo
Ny lalao The Thrones Kingdom at War dia manangona mba hanangona sy hanam-piadiana miaraka amina tifitra voatifitra, tafika mitam-piadiana, lefona mahery, mpanafika tsy manam-paharoa ary mpiambina mpandinika. Mila fanamiana mety ny karazana tafika tsirairay, saingy tsy maintsy hatsaraina tsindraindray mba hampitomboana ny fandresena. Ity dingana ity dia manana hetsika feno amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ny harena, ny fananganana trano ary ny famokarana fitaovana isan-karazany. Arakaraka ny itiavanao ny zava-nitranga, ny fanavaozana bebe kokoa ny seza fiandrianana ao amin'ny lalao War dia mitondra. Vetivety dia tsy mahavita miatrika ny fanafihan'ny fahavalo irery izy ireo. Amin'ny fotoana iray, tsy misy afaka atao raha tsy misy ny fanohanan'ireo mpiara-dia aminy, ary noho izany dia miditra amin'ny alàlan'ny firaisankina ary manaiky ny ady. Ny mpilalao dia afaka mandray anjara amin'ny adin'ny PvP sy PvE, izay hisy fiantraikany mahasoa amin'ny traikefa. Amin'ny fotoam-pandrindrana, mampiofana miaramila, mitazona azy ireo tsara amin'ny isa-minitra. Ny fikarohana nataon'ny mpahay siansa nanintona ny tanàna amin'ny halehiben'ny voninahitry ny mpitondra azy dia hanampy ihany koa ho lasa matanjaka. Manangana Akademia ho azy ireo, ary hamorona fitaovana ilaina, potioma, fitaovana ary haitao izy ireo. Miaraka amin'ny fanampian'izy ireo dia hahatratra eo amin'ny haavo vaovao ara-toekarena sy fahaiza-manao miaramila ianao, mahatonga ny lalao Tron Kingdom amin'ny Var mahaliana kokoa. Ankoatr'izay, ny fanavaozam-baovao dia navotsotra tsindraindray, manome sata vaovao tsipika.
iPlayer: Legends ny Dreams
Dragon totohondry 2 - Ady ny ran'ny
Ny ady tao-dalana fahafatesana
Ady ny sahona
Dress Up - The Very Fairy Castle
Hitsangana ny lapa
Handrava fiarovana 2